दिनभर चक्रपथ रातपरेपछि नागढुंगा कट्ने ‘रहस्यमयी’ बस ! कर्तुत थाहापाउदा प्रहरीको पनि होस उड्यो – Enepali Samchar
दिनभर चक्रपथ रातपरेपछि नागढुंगा कट्ने ‘रहस्यमयी’ बस ! कर्तुत थाहापाउदा प्रहरीको पनि होस उड्यो
February 6, 2021 adminLeaveaComment on दिनभर चक्रपथ रातपरेपछि नागढुंगा कट्ने ‘रहस्यमयी’ बस ! कर्तुत थाहापाउदा प्रहरीको पनि होस उड्यो
e nepalisamchaar / बा. २ ख ६१०६ नम्बरको बस दिनभर काठमाडौंको चक्रपथमा रुटमा चल्ने गर्थ्यो । दिनभर चक्रपथमा यात्रुलाई सेवा दिने यो बस जब साँझ पर्न थाल्थ्यो त्यसपछि एकाएक नागढुंगा हुँदै पृथ्वीराजमार्ग तर्फ लाग्थ्यो । रातभर पृथ्वीराजमार्गका विभिन्न स्थान पुगेपछि बिहान झिसमिसेमै बस पुनः काठमाडौं प्रवेश गर्थ्यो । यो क्रम निकै लामो समय चलिरह्यो । दिनभरी चक्रपथमा यात्रुलाई सेवा दिने र रातपरेपछि पृथ्वीराजमार्गमा पुग्ने रहस्यमयी बस यतिबेला भने प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ । बस मात्रै नभएर बसका धनी रविन घलेसहित तीन व्यक्ति पनि यतिबेला प्रहरी हिरासतमै छन् ।
आज मिति २०७७ साल कात्तिक २२ गते शनिबार , शनिदेवको दर्शन गरि आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस